Izindaba - ifenisha yensimbi
Ifenisha yensimbi iwuhlobo lwefenisha esebenzisa izingxenye zensimbi ekwakhiweni kwayo.Kunezinhlobo ezahlukene zensimbi ezingasetshenziswa, njengensimbi, i-Carbon steel, i-aluminium, nensimbi engagqwali.
Imikhiqizo yensimbi neyensimbi isetshenziswa kakhulu ezinhlelweni eziningi, kusukela empahleni yehhovisi kuya kuzilungiselelo zangaphandle.
I-Cast Iron isetshenziswa kakhulu ekuqedeleni ngaphandle nezilungiselelo, njengalezo ezisetshenziselwa imilenze yebhentshi namatafula ensimbi aqinile.Ifanele ukusetshenziswa kwangaphandle ngenxa yokuqina kwayo, ubunzima kanye nokwakheka okunzima okujwayelekile.Ububi obukhulu kulokhu ukuthi, njengoba iwuhlobo olumsulwa lwe-Iron ingaphansi kokugqwala ezandleni zomswakama nomoya.
I-Stainless Steel isetshenziswa kakhulu ezintweni eziningi zangaphakathi zangaphakathi ezibandakanya insimbi.Amahinge amaningi, amaslayidi, izisekelo nezingcezu zomzimba zakhiwe nge-Stainless.Inamandla aphezulu okudonsa, evumela ukuthi isetshenziswe kusetshenziswa amashubhu angenalutho, ukunciphisa isisindo nokwandisa ukufinyeleleka komsebenzisi.
I-Aluminium iyinsimbi ekwazi ukumelana nokubola, futhi ukusizakala ngalezi zimfanelo, isetshenziselwa kakhulu ifenisha egxiviziwe neyakhiwe, ikakhulukazi esigabeni sezihlalo ezibunjiwe.Ama-athomu e-Aluminium akha ungqimba lwangaphandle lwe-Aluminium Oxide, oluvimbela i-aluminium yangaphakathi ukuthi ingagqwali.
Ifenisha yensimbi iyikhethelo elidumile lempahla, ikakhulukazi esetshenziswa ngaphandle kwamadekhi namapulangwe.Kodwa-ke, ifenisha yensimbi ingasetshenziswa endlini, njengemibhede yethusi, amatafula ethusi, ama-rack bakers ensimbi namakhabhinethi ensimbi.Ngaphandle kokuqina, ifenisha yensimbi iyathandeka, inikeza ukubukeka kwesimanje ekhaya lakho.Ukuze ukwenze kugqame, okudingekayo nje ukupholishwa okuhle ukuze kufakwe ukukhanga nomlingisi.